अपि पावरको हकप्रद शेयर आजबाट बिक्री खुल्ला ! - DURBAR TIMES
HomeEconomyअपि पावरको हकप्रद शेयर आजबाट बिक्री खुल्ला !
काठमाडौं : आज शुक्रबार (कात्तिक १४ गते) देखि हकप्रद अपि पावरको सेयर बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको ५६ लाख ७० हजार कित्ता (४७%) हकप्रद सेयर बिक्री खुुला गरेको हो ।
यसमा मंसिर ४ गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । २०७६ साल फागुन ३० गतेसम्म कायम सेयरधनीले यो हकप्रद भर्न पाउनेछन् ।
स्टान्डर्ड चार्टर्डद्वारा लाभांश घोषणा: बोनस र नगद कति ?
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाटशेयरधनीहरुलाई ११.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको कात्तिक १३ गते बसेको सञ्चाल समितिको बैठकले ७ प्रतिशत बोनस शेयर तथा ४.८४प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यो लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी वार्…
Previous articleविवाद भएपछि अक्षय कुमारको फिल्म ‘लक्ष्मी बम’को नाम फेरिएर राखियो लक्ष्मी
Next articleस्टान्डर्ड चार्टर्डद्वारा लाभांश घोषणा: बोनस र नगद कति ?